Priscilla ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုတောင်းဆိုခြင်း - ကိုရီးယား Manhwa - မန်ဟွာ - မန်ဂါနှင့် Light Novel Online Webtoon ကိုအခမဲ့ဖတ်ပါ
ပြစ်ကိလ၏အိမ်ထောင်ရေးတောင်းဆိုချက် ပျမ်းမျှ 4.1 /5ထဲက 9
N / A, 19.7K အမြင်များရှိသည်
စိတ်ကူးစိတ်ကမ်း, သမိုင်း, စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း
Priscilla Motia သည်ကြေးစားကော်ပိုရေးရှင်းတွင်နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သူမ၏ဖခင်သေဆုံးချိန်အထိ၊ သူ့မိထွေးသည်သူတို့၏အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို ၁၀ နှစ်သမီးအရွယ်ရှိသူမ၏ကွာရှင်းထားသောခင်ပွန်းအားရောင်းချခြင်းမှကံကောင်းထောက်မစွာရရှိခဲ့သည်။ ကြေးစားအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်မတော်တဆမှုတစ်ခုအရ၊ သူမဆုံးရှုံးခဲ့သော ၁၅ နှစ်ကိုပြန်လည်ယူရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ သူမသည်ကြီးမားသောစွန့်စားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်။ “ မင်းပြန်လာပြီ!” သို့သော်ပြစ်ကိလသည်သူ၏ကွာရှင်းပြတ်စဲနေသောခင်ပွန်းသည်ကြောင့်ကြီးမားသောအကြွေးတင်နေသည်။ လက်စားချေရန်ရှာနေသည့်ပြစ်ကိလသည်စစ်မြေပြင်ရှိအနက်ရောင်သေခြင်း Kian Rustin ကိုရှာဖွေပြီး“ မင်းကိုငါတောင်းပန်ချင်နေတယ်” ဟုမေးသည်။ "မင်းငါ့ကိုဘာလုပ်စေချင်တာလဲ? ဒီဟာလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကြိုးပမ်းမှုလား? Kian Rustin! ကျွန်ုပ်ယောက်ျားဖြစ်တော်မူပါဟုတောင်းပန်လေ၏။ ဒါကြောင့်ပြစ်ကိလသည်မြေနှင့်ချစ်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်လော။
အခန်းကြီး 59 ဧပြီလ 12, 2021
အခန်းကြီး 57 မတ်လ 30, 2021
အခန်းကြီး 56 မတ်လ 23, 2021
အခန်းကြီး 55 မတ်လ 17, 2021
အခန်းကြီး 54 မတ်လ 8, 2021
အခန်းကြီး 53 မတ်လ 1, 2021
အခန်းကြီး 52 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2021
အခန်းကြီး 51 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2021
အခန်းကြီး 50 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 49 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2021
အခန်းကြီး 48 ဇန်နဝါရီလ 26, 2021
အခန်းကြီး 46 ဇန်နဝါရီလ 12, 2021
အခန်းကြီး 45 ဇန်နဝါရီလ 4, 2021
အခန်းကြီး 44 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 43 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 42 ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2020
အခန်းကြီး 40 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2020
အခန်းကြီး 39 နိုဝင်ဘာလ 26, 2020
အခန်းကြီး 38 နိုဝင်ဘာလ 19, 2020
အခန်းကြီး 37 နိုဝင်ဘာလ 13, 2020
အခန်းကြီး 36 နိုဝင်ဘာလ 9, 2020
အခန်းကြီး 35 နိုဝင်ဘာလ 2, 2020
အခန်းကြီး 34 အောက်တိုဘာလ 21, 2020
အခန်းကြီး 33 အောက်တိုဘာလ 15, 2020
အခန်းကြီး 32 အောက်တိုဘာလ 8, 2020
အခန်းကြီး 31 ဇူလိုင်လ 13, 2020
အခန်းကြီး 13 မေလ 19, 2020
အခန်းကြီး 12 မေလ 19, 2020
ဇန်နဝါရီလ 9, 2020